Mayelana ne-JCT - Taizhou Jingchuan Electronics Technology Co., Ltd.
I-Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co., Ltd.yinkampani yezobuchwepheshe yamasiko egxile ekukhiqizeni, ekuthengiseni nasekuqashiseni izimoto zokukhangisa ze-LED, izimoto zokukhangisa, nezimoto zesiteji esizihambayo.
Le nkampani yasungulwa ngo-2007. Ngezinga layo lobuchwepheshe nobuchwepheshe obuvuthiwe ezimotweni zokukhangisa ze-LED, ama-trailer adumile e-LED neminye imikhiqizo, ivele ngokushesha emkhakheni wezokuxhumana ongaphandle weselula futhi iyiphayona ekuvuleni umkhakha wezimoto zokukhangisa ze-LED eChina. Njengomholi wezimoto zemidiya ze-LED zaseChina, uTaizhou Jingchuan ngokuzimela wakhulisa futhi wajabulela amalungelo obunikazi angaphezu kuka-30 wezobuchwepheshe kuzwelonke. Kuyinto yokwenziwa okujwayelekile kwezimoto zokukhangisa ze-LED, izimoto zokukhangisa ze-LED, kanye nezimoto zokukhangisa ngomlilo. Imikhiqizo ifaka izinhlobo ezingaphezu kwezingama-30 zezimoto ezifana namaloli e-LED, ama-trailer e-LED, izimoto zasesiteji ezihambayo, ama-trailer e-solar, iziqukathi ze-LED, ama-trailer wokuqondisa izimoto kanye nezikrini zemoto ezenziwe ngezifiso.
NgoMashi 2008, inkampani yethu yaklonyeliswa ngo- "2007 China Advertising New Media Contribution Award"; ngo-Ephreli 2008, yanikezwa i- "High-tech Award for Leading China's Outdoor Media Progress"; futhi ngo-2009, yanikezwa isihloko esithi "2009 China Brand and Communication Conference 'Brand Contribution Award' ethonya i-Chinese Enterprise Brand Star".
I-Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co., Ltd. itholakala eTaizhou, esifundazweni saseZhejiang, idolobha elihle kakhulu e-China. I-Taizhou itholakala ogwini oluphakathi neSifundazwe saseZhejiang, eduze nolwandle lwaseMpumalanga empumalanga, imvelo yinhle. Inkampani yethu etholakala eTaizhou zone yezomnotho futhi inamanzi alula, umhlaba nomoya wokuhamba. Inkampani yethu iye yaklonyeliswa "Taizhou Key Enterprise of Export Cultural" futhi "Taizhou Key Enterprise Service Service" ngu Taizhou uhulumeni kamasipala.
Izindawo zokukhiqiza ezihlobene nale nkampani zithuthukile, ziphelele, futhi ngasikhathi sinye zinazo zonke izinhlobo zemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme kanye nezinsimbi. Le nkampani ineqembu labaphathi elisebenza kahle neqembu le-R & D, eligxile ekwethulweni nasekuqeqeshweni kwabasebenzi abaphezulu bezobuchwepheshe kanye nabachwepheshe. Ngamandla amakhulu ocwaningo lwesayensi, inkampani yethu isungule ama-workshops afanelekile, amakamelo okuphatha kanye nezikhungo ze-R & D. Njengamanje, kuneminyango yezobuchwepheshe bokukhiqiza, umnyango wokuhlola ikhwalithi, umnyango wezokuhlinzeka, umnyango wezokuthengisa, umnyango wezinsizakalo zokuthengisa ngemuva, umnyango wezimali neminye iminyango, ngokuhlukaniswa okucacile kwezabasebenzi nokwabiwa kwesayensi.
Le nkampani ibambelela kulayini wenqubomgomo yekhwalithi ye- "Ikhwalithi yezinkanyezi ezinhlanu, ifuna izinto ezintsha kumaqiniso". Kusukela yasungulwa ngo-2007, ikhwalithi yomkhiqizo kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva iphakeme kakhulu kunaleyo yomkhakha ofanayo. Le nkampani ineqembu elivuthiwe lokuthengisa amazwe angaphandle kanye nethimba lomsebenzi wobuchwepheshe ngemuva kokuthengisa. Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni angaphezu kuka-50 kanye nezifunda ezifana ne-Europe, i-United States, ne-Middle East. Eminyakeni edlule, bekulokhu kwanelisa amakhasimende ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu nezisezingeni eliphakeme.
Umsebenzi weJingchuan: Vumela wonke amakhona omhlaba ajabulele idili elibonakalayo
Okujwayelekile kweJingchuan: Ukuqamba, Ukwethembeka, Ukuthuthukiswa kanye Win-win
Inkolelo kaJingchuan: Akukho lutho emhlabeni olungenakwenzeka
Igoli likaJingchuan: Ukwakha uphawu lomhlaba wonke emkhakheni wezimoto zokukhangisa eziphathwayo
Isitayela seJingchuan: ngobuqotho nangokushesha, gcina isithembiso
Ukuphathwa kweJingchuan: Igoli nokuqondiswe emphumeleni
Ngasikhathi sinye, uJingchuan ubelokhu ebambelela emisha eqhubekayo yezobuchwepheshe ukudala inani lamakhasimende, elithathwa njengomthombo wobungqabavu bebhizinisi. I-Jingchuan iwine ukwethenjwa nokubambisana kwamakhasimende emhlabeni wonke ngamakhono ayo akhulayo emisha, ikhono elenziwe ngokwezifiso eliguquguqukayo nokukwazi ukulethwa okuphelele.
Ebhekene namathuba nezinselelo ezintsha, iJingchuan izoqhubeka nenhloso yayo yenkampani "yokwakha umbuso webhizinisi onamasondo", ezimisele ukuba ngumhlinzeki wesevisi wokusebenza ophelele wemidiya efakwe ezimotweni eChina. Ucwaningo olunzulu nokuthuthukiswa kwezimoto zemidiya ze-LED, ama-trailer e-solar kanye neminye imikhiqizo, ukuze kube negalelo elincane ekuthuthukiseni amabhizinisi kazwelonke aseChina.
Led Ucingo Truck, Ucingo Led Screen Truck, Led Ucingo Truck Ukudayiswa, Ucingo Led Billboard Truck, Led Ucingo Trailer, Ucingo Led Advertising Truck,